Medical Writings ဆေးပညာစာများ: First Aid Manual ရှေးဦးသူနာပြုလက်စွဲ
ရှေးဦးသူနာပြုဆိုသည်မှာ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့အား ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံမရောက်မီ သာမန်လူတဦးက အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြုစု-စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းကို ခေါ်သည်။ အခြေခံ ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ပြုစု-စောင့်ရှောက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အသက်ကယ်ရန် အချို့ကိစ္စများအတွက် လက်တွေ့ သင်ကြား တတ်မြောက်မှု လိုအပ်သည်။ ဥပမာ Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) နှလုံး-အဆုပ် ပြန်လည် အလုပ် လုပ်စေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
၁) အသက်ကယ်ရန် (Preserve life)
၂) နောက်ထပ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရစေရန် (Prevent further injury)
၃) လျှင်မြန်စွာ ပြည်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် (Promote recovery)
၄) မိမိကိုယ်ကိုလဲ ကာကွယ်နိုင်ရန် (Protect yourself)
• Breathing အသက်ရှူခြင်း
• Bleeding သွေးထွက်ခြင်း
• Bones အရိုးထိခိုက်ခြင်း
• Airway အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊
• Breathing အသက်ရှူနိုင်ခြင်း၊
• Circulation သွေးလှည့်ပတ်နေခြင်း
First-aid kit ရှေးဦးသူနာပြုအိပ်
• လူနာ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်နေ၊ မနေကို စစ်ဆေးပါ။ လူနာကို မာသောကြမ်းပြင်ပေါ်ထားပါ။
• လည်ပင်းကျိုးခြင်း ရှိ၊ မရှိကြည့်ပါ။ လည်ပင်းအား ဆန့်ထုတ်ခြင်း၊ မေးစေ့အား မတင်ခြင်းဖြင့် လူနာ၏
• လျှာသည် အသက်ရှူလမ်းကို ပိတ်မနေအောင် လုပ်ပါ။
B for Breathing အသက်ရှူ၊ မရှူ စစ်ဆေးခြင်း လူနာသည် အသက်ရှူနေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ပါးစပ်၊ ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက် လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်၍ စစ်ဆေးပါ။ မရှိပါက ချက်ချင်း Mouth-to-mouth နည်းခြင့် အသက်ရှူသွင်းပေးရမည်။
C for Circulation သွေးလှည့်ပတ်မှူစစ်ခြင်း (နှလုံးအလုပ် လုပ်-မလုပ်စစ်ခြင်။ လည်ပင်းရှိ (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြောအား စမ်းပါ။ သွေးခုန်မှုမတွေ့ရပါက (စီ-ပီ-အာရ်) လုပ်ပါ။
Mouth-to-Mouth ပါးစပ်မှပါးစပ် လေမှုတ်သွင်းနည်း
• ပါးစပ်၊ အာခေါင်၊ လည်ချောင်းထဲ ပစ္စည်းများ (အမှိုက်၊ အန်ဖတ်၊ အဝတ်စ) ဆို့ ပိတ်နေပါက ဖယ်ရှားပါ။
• လူနာ၏ လည်ပင်းကို ဆန့် လျက် မေးစေ့ကို အထက် (ရှေ့ )သို့ မတင်ပေးပါ။
ထိုသို့လုပ်ရသည်မှာ အချိန်တစ်စက္ကန့် သာကြာမည်။
• လူနာ၏ အဆုပ်ကို လေဘူဘောင်းကဲ့သို့အတင်းဖေါင်းသွားအောင် လုပ်ရန်မလိုပါ။
နှလုံး-အဆုပ် ပြန်လည် အလုပ်လုပ်စေရန် ပြုစုခြင်း အေ-ဘီ-စီ-ဒီ
နှာခေါင်း-ပါးစပ်တို့ ပိတ်နေ-မနေစစ်ပါ။ လည်ပင်ရိုး ကျိုးနေ-မနေစစ်ပါ၊ လူနာကို မာသောကြမ်းပြင်ပေါ် တင်ထားပါ၊ သတိလစ်နေသည့် လူနာ၏ လျှာသည် အသက်ရှူလမ်း အာခေါင်ကို ပိတ်နေတတ်သည်၊ ထိုသို့ မပိတ်စေရန် လူနာ၏ လည်ပင်းကို ဆန့် လျက် မေးစေ့ကို အထက်(ရှေ့ )သို့ မ-တင်ပေးထားရမည်။
အသက်ရှူနေလျင် ရင်ပတ်-ဝမ်းဗိုက် လှုပ်နေမည်၊ နှာခေါင်းက လေထွက်မည်၊ ထွက်လေသည် အပြင်လေထက် အနည်းငယ် ပိုပူသည်။ အသက်မရှူပါက ချက်ချင်း Mouth-to-Mouth ပါးစပ်မှ ပါးစပ် လေမှုတ်သွင်းနည်း လုပ်ပါ။
• မိမိ၏ လက်ဝါး နှစ်ဖက်ကို ထပ်လျက် လူနာ၏ ရင်ပတ် အလယ်တည့်တည့် နို့ အုံနှစ်ဖက်၏ အလယ်၊ ရင်ညွန့် ရိုး အပေါ်မှာ တင်ပါ၊
• မိမိ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့် တန်းထားပြီး၊ မိမိ၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မိမိလက်နှစ်ဖက်အပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ကာ၊ မိမိ၏ လက်ပါးနှစ်က လူနာ၏ရင်ပတ်ကို ဖိချပေးရမည်။
• နှစ်လက်မခန့် ကျသွားအောင် ဖိလိုက်ပြီးနောက် လုံးဝကြွလိုက်ရမည်။
• တမိနစ်လျင် အကြိမ် ၁ဝဝ နှုန်းဖြင့် ထိုအတိုင်း ဖိလိုက်-ကြွလိုက် လုပ်ရမည်။ • အကြိမ် ၃ဝ လုပ်ပြီးတိုင်း၊ ပါးစပ်မှလေသွင်းခြင်း (၂)ခါ လုပ်ရမည်။ • ရင်ပတ် ဖိ-ကြွခြင်းနှင့် ပါးစပ်မှလေသွင်းခြင်းကို စုစုပေါင်း (၂)မိနစ် သို့မဟုတ် (၅)ပါတ် လုပ်ရမည်။
• ကလေး၏ ရင်ပတ်ပေါ် မိမိလက်ဝါးနှစ်ဖက် ထပ်တင်လျက် ကလေးရင်ပတ်၏ သုံးပုံတပုံ ပြားသွားအောင် ဖိပေးပါ။ • တမိနစ်လျင် အကြိမ် ၁ဝဝ နှုန်။ဖြင့် အခါ ၃ဝ လုပ်ပြီးတိုင်း ပါးစပ်မှ လေသွင်းရမည်။
• လူကြီးကဲ့သို့ အကြိမ် ၃ဝ ဖိပြီးတိုင်း၊ လေနှစ်ခါမှုတ်သွင်းပေးရမည်။ • စုစုပေါင်း (၂)မိနစ် သို့မဟုတ် (၅)ပါတ် လုပ်ရမည်။
• မရှူနိုင်-မမြိုနိုင်ဖြစ်နေ-မနေ မေးပါ။ • ရေ စသည် အသောက် မခိုင်းရ၊ • အမေးကို မဖြေနိုင်ဘဲ လက်ဟန် ခြေဟန်နှင့် ပြပါက အရေးကြီးနေပြီ။ • မျက်နှာပြာလာမည်။ အသက် မရှူနိုင်တော့။
• ဝမ်းဗိုက်အား ချောင်းဆိုးတာစေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့်နည်းသုံးပါ။ • လျှင်မြန်စွာ ဝမ်းဗိုက်အား အထက်ဆီသို့ တွန်းတင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ • လူနာအား ရှေ့သို့ အနည်းငယ် ကိုင်းထားပါ။ • လူနာ၏ နောက်မှနေ၍ မိမိလက်တဖက်အား လက်သီးဆုပ်ပါ။ • အခြားလက်က လက်သီးဆုပ်ထားသည့်လက်၏ လက်ကောက်ဝတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ပါ။ • ၄င်းလက်များကို လူနာ၏ နံရိုးများ၏အောက်နားတွင် ထားပါ။ • လျှင်မြန်စွာဖြင့် မိမိလက်နှစ်ဖက်အား အထက်နှင့်အတွင်းဖက်သို့ တွန်းတင်လိုက်ပါ။ • လူနာသည် ချောင်းဆိုးထုတ်လိုက်မည်။ • အသက်ပြန်ရှူလာသည်အထိ ထပ်လုပ်ပါ။
လူနာက သတိလစ်နေလျှင် ပက်လက်လဲနေပါစေ။ • လူနာ၏အနီး ဒူးထောက်၍ထိုင်ပါ။ • မိမိ၏ လက်ဖနောင့်အား လူနာ၏ ဝမ်းဗိုက်၊ နံရိုးများအောက်နားတွင် တင်၍ မိမိ၏ နောက်လက် နှစ်ဖက်ကို ထပ်ကာ အတွင်းနှင့် အထက်ဆီသို့ ဖိပေးပါ။ • ၅ ကြိမ် လုပ်ပါ။ • လိုအပ်လျှင် (စီပီအာရ်) လုပ်ပါ။
နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း နှာခေါင်းထဲက သွေးပြန်ကြောလေးတခုခုပေါက်ခြင်း၊ ကြောက်ရန်မလို၊ အိမ်မှာ ကုသနိုင်၊ ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများ၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ နှာခေါင်းကို ဆွဲလိမ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆေးဝါး (အက်စ်ပရင်) ကြောင့် နှာခေါင်းထဲ တခုခုဝင်ခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်း၊ မတည့်ဖြစ်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးဖိအား (BP) တက်ခြင်း၊ Atherosclerosis သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးခဲရောဂါ၊ ကိုကိန်းဆေး။
နှာခေါင်းအား ပိုင်းထားသည့် အကန့်မှ ယိုသည်၊ နှာခေါင်းအား ထိုးမိ၍ဖြစ်သည်၊ နှာခေါင်း၏ ရှေ့မှ ယိုမည်။ ရပ်နေလျှင်၎င်း၊ ထိုင်နေလျှင်၎င်းယိုမည်၊ ပူသောရာသီ၊ အေးလွန်းသောရာသီ တို့၌ ဖြစ်တတ်သည်။
၂။ နှာခေါင်း နောက်မှယိုခြင်း နှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှ ထွက်သည်။ နှာခေါင်းနောက်၊ အာခေါင်သို့ ထွက်မည်။ အသက်ကြီး၊ သွေးဖိအား (BP) များသူများ ဖြစ်တတ်၊ ဆိုးဝါးနိုင်သည်။
• ထိုင်ပါ၊ • ရှေ့သို့ ကိုင်းထားပါ။ • နှာခေါင်း၏ ပျော့သည့်အပိုင်းအား လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့် ညှစ်ပါ။ • ဆက်တိုက် ညှစ်ရမည်။ • (၁ဝ) မိနစ်ကြာပါစေ။ • ကလေးဖြစ်ပါက အာရုံ ပြောင်းပေးပါ။ • နှာခေါင်းကို (၂) ရက်တိုင် မထိခိုက်စေရန် သတိပေးပါ။ • နှာခေါင်းအပေါ် ရေခဲတင်ပေးပါ။ • (၁၅) မိနစ်အထိ မရပါက၊ ထိခိုက်မိ၍ယိုခြင်း ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်ပြပါ။၊ • ခဏခဏယိုပါက ဆရာဝန်ပြပါ။
ရေခဲဖြင့် ဖိပေးပါ။ ဆားထည့်ထားသည့် ရေခပ်နွေးနွေးဖြင့် တနေ့ (၂) ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ မရပါက ဆရာဝန်ပြပါ။ Aspirin အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ မသောက်ရ၊ ဗီတာမင် စီ သောက်ပါ။ ခဏခဏယိုပါက ဆရာဝန်ပြပါ။
ပါးစပ်၊ ဒဏ်ရာ၊ အရေပြား၊ အတွင်းပိုင်းရှိ အင်္ဂါများမှ ယိုနိုင်သည်။
မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သွားနှုတ်ခြင်း၊ ဆေးကုနေစဉ်ဖြစ်ခြင်း၊ နေမကောင်းစဉ် ဖြစ်ခြင်း၊ Hemophilia, Scurvy, Cancer, Thrombocytopenia, A plastic Anemia, Leukemia, Peptic Ulcer, Platelet Disorder, Liver Disease, Septicemia စသည့်ရောဂါများ၊ လက္ခဏာများ ဒဏ်ရာ၊ အနာတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးခြည်ဥဖြစ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ စအိုတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဆီးထဲ သွေးပါခြင်း၊
လူနာမကိုင်မီ လက်ကို စဉ်ကြယ်အောင် ဆေးပါ။ လက်အိပ်စွပ်ပါ။ လူနာကို လှဲနေစေပါ။ ခြေရင်းပိုင်း မြှင့်ထားပါ။ သွေးထွက်သည့်နေရာကို ဖြစ်နိုင်ပါက မြှင့်ထားပါ။ မလိုအပ်သော သွေးခဲစသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ဖယ်ရှားပါ။
သန့်ရှင်းသော အဝတ်စ၊ ပတ်တီး၊ လက်ဖြင့် သွေးထွက်သည့်နေရာကို (၂ဝ) မိနစ်ခန့် ဖိထားပါ။ အဝတ်စ၊ ပတ်တီးတို့ကို မဖယ်ဘဲ ပလာစတာကပ်ပါ။ သွေးထပ်စိုလာပါစေ ပတ်တီးမဖယ်ပါနှင့်။ လိုအပ်ပါက နောက်ထပ်၍ ပတ်တီး၊ ပလာစတာသုံးပါ။ လိုအပ်ပါက သွေးထွက်စေသော သွေးလွှတ်ကြောအား ဖိအားပေးပါ။ ဥပမာ လက်ဆိုလျှင် ဂျိုင်း၊ လက်မောင်း ခြေထောက်ဆိုလျှင် ပေါင်ခြံ၊ ပေါင်။
• နာကျင်ခြင်း၊ • လှုပ်ရှားမှုခက်ခြင်း၊ • မလှုပ်နိုင်ခြင်း၊ • ရောင်ခြင်း၊ • သွေးခြည်ဥခြင်း၊ • သွေးထွက်ခြင်း၊ • ဖိလျှင်-ထိလျှင် နာခြင်း၊ • ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းသွားမည်။ လုပ်ဆောင်ရန်များ
1. သွေးမထွက်ရန်လုပ်ပါ။ 2. အနာဆေးထည့်ပါ။ 3. အသက်ရှူမှု စစ်ဆေးပါ။ 4. လူနာကို နှစ်သိမ့်ပါ။ 5. တခြားဒဏ်ရာ ရှိ-မရှိစစ်ဆေးပါ။ 6. ကျိုးသည့်အပိုင်းကို မလှုပ်ရှားအောင်လုပ်ပါ။ 7. ရေခဲတင်ပေးပါ။ 8. နှိပ်မပေးရ။ 9. ခြေထောက်-လက် ကျိုးလျှင် ဆန့်ဆွဲ